के तपाइँ नयाँ सामग्री प्रबंधन प्रणालीमा खुल्ला हुनुहुन्छ? | Martech Zone
के तपाइँ नयाँ सामग्री प्रबंधन प्रणालीमा खुल्ला हुनुहुन्छ?
शुक्रबार, जुन 23, 2017 आइतबार, जुन 25, 2017 Douglas Karr
केही वर्ष पहिले, हाम्रा ग्राहकहरूको १००% प्रयोग WordPress तिनीहरूको रूपमा सामग्री व्यवस्थापन प्रणाली। दुई वर्ष पछि र त्यो संख्या झन्डै एक तिहाइले घटेको छ। किनकि म अहिले एक दशकको लागि वर्डप्रेसमा साइटहरू विकास र डिजाईन गर्दै छु, म प्राय केही कारणका लागि त्यो सीएमएसमा हेर्छु।
किन हामी वर्डप्रेस प्रयोग गर्दछौं
अविश्वसनीय विषय विविधता र समर्थन। साइटहरू मनपर्दछ थीमफोरस्ट मेरो लागि मनपर्ने हो जहाँ म न्यूनतम लागत मा सबै भन्दा आश्चर्यजनक टेम्पलेट्स पाउन सक्छौं जुन हामी लागू गर्न सक्छौं र हाम्रो ग्राहकहरु को लागी निर्माण गर्न सक्छन्। हामी अझ अनुकूलन थिमहरू पनि प्रस्ताव गर्दैनौं किनकि हामी एउटा निर्माण गर्न सक्दछौं बाल विषयवस्तु र सबै प्यारेन्ट थिमका आश्चर्यजनक सुविधाहरू मान्नुहोस्। असाधारण साइटहरू समयको एक अंशमा निर्माण गर्न सकिन्छ।
प्लगइन र एकीकरण विविधता र समर्थन। किनभने धेरै साइटहरू वर्डप्रेस चलाउँछन्, यो वास्तवमै कुनै पनि कम्पनीको लागि आवश्यक छ जुन सामग्री व्यवस्थापन प्रणालीसँग एकीकृत गर्न चाहन्छ। ईमेल विक्रेताहरू, CRM, ल्यान्डि page पृष्ठ समाधानहरू, इत्यादिबाट ... यो एकीकृत नभएको कम्पनी पत्ता लगाउन लगभग गाह्रो छ।
उपयोग जहाँसुकै छ, त्यसैले कर्मचारीहरू र प्रशासकहरू भेट्टाउँछन् जुन WordPress लाई प्रयोग गर्दछ प्राय साधारण स्थान हो। नयाँ सीएमएसको र्याम्पिंगमा कम्पनीमा थप प्रशिक्षण समय आन्तरिक आवश्यक पर्दछ, त्यसैले एक लोकप्रिय प्रयोग गर्दा आन्तरिक रूपमा चीजहरूलाई कम कम कष्ट दिन सक्दछ।
WordPress प्रबन्धित होस्टिंग प्लेटफार्मों जस्तै फ्लाईव्हील, WPEngine, Pantheon, तरलवेब, र पनि GoDaddy, र अधिक सामान्य भइरहेको छ। पुरानो होस्टिंग कम्पनीहरूले वास्तवमै वर्डप्रेसलाई कहिल्यै समर्थन गरेनन् किनकी यो यति लोकप्रिय छ कि कम्पनीहरू प्रायः होस्ट र विकासकर्ता बीचको साइटमा खराब के हुन सक्छ भन्ने बारे लडाईमा थिए। यी सेवाहरूले सुरक्षा प्रदान गर्दछ, बिल्ट-इन ब्याकअप, सामग्री डेलिभरी नेटवर्कहरू, SSL प्रमाणपत्रहरू, निगरानी, ​​स्टेजिंग, र अन्य उपकरणहरूको होस्ट तपाईंको साइटलाई दुबै छिटो र स्थिर बनाउन।
यदि मलाई WordPress को रूपमा बेचिएको जस्तो लाग्यो भने, मसँग टाँसिनुहोस्। मुद्दाहरू उत्पन्न भएका छन् जुन हामीलाई अन्य सामग्री व्यवस्थापन प्रणालीहरूमा ग्राहकहरूको सिफारिश गर्न सुरू गर्न सुरू भयो।
किन हामी वर्डप्रेस प्रयोग गर्दैनौं
बिक्री - WordPress कुनै पनि बिक्री सम्बन्धित सेवा, विषयवस्तु, वा प्लगइन मा तेजी हुन प्रयोग। तिनीहरू प्रायः कसैलाई पनि आफ्नो प्रणाली भित्र प्रकाशन उपकरणहरूबाट रोक्न चाहान्छन् जुनमा यसको मूल्य ट्याग प्रस्ताव गरिएको थियो। तर अब, यदि तपाईं एकीकृत गर्नुहुन्छ jetpack, तपाईं Automattic ब्याकअप सेवाहरू खरीद गर्न नग सन्देशहरूसँग भेट्नुभयो। त्यसो भए, अचानक खुला स्रोत अधिवक्ताहरूले अब आफ्नै सेवाहरू बिक्री गरिरहेका छन्। म दुखी छैनन उनीहरूले यो गरिरहेका छन्, केवल यो हो कि यसलाई फ्यान्ड गरिएको थियो।
सुरक्षा - यसको लोकप्रियताको कारण, वर्डप्रेस पनि ह्याकरहरूको लागि एक लक्ष्य बन्यो। एक राम्रो उत्पादन गरिएको विषयवस्तु र एक दर्जन प्लगइनहरूको साथ औसत साइटले ह्याकरहरूको लागि खुल्ला प्वाल छोड्दछ त्यसैले साइट मालिकहरू, प्रशासकहरू र होस्टहरूले आक्रमण गर्न थप सतर्क रहनुपर्दछ र थिम र प्लगइन अपडेटहरूको शीर्षमा रहनु पर्छ।
विकास - मसँग एक ग्राहक छ जुन एक साईट र प्लगइनहरूको विशिष्ट सेट अहिले छ जसको बारे मा re उल्लेख छ गुगल फन्ट्स तिनीहरूको हेडरमा किनभने तिनीहरूको विषयवस्तु र डिजाइन प्लगइनहरूको संख्या सबै यो सेवाको रूपमा प्रस्ताव गर्दछ। एक सेवा सुनिश्चित गर्न एक विधि धेरै भन्दा बढि कल गरिएको छैनको बावजुद, विकासकर्ताहरूले यसलाई बेवास्ता गरे र आफ्नै संदर्भहरू थप गरे। यसले गति र श्रेणीकरणको लागि साइटमा चोट पुर्‍याउँछ ... र समस्या निवारण बिना औसत प्रयोगकर्ताले थाहा पाउनु पर्ने कुरा त्यस्तो होइन। WordPress मा नराम्रो अभ्यासहरू एपीआई एकीकरण बढि सामान्य भइरहेको छ। मसँग यी मुद्दाहरू सुधार गर्न दर्जनौं टिकटहरू विकासकर्ताहरूको साथ खुला छ। धेरै उत्तरदायी छन्, धेरै छैनन्।
जटिलता - WordPress मा एक सामान्य घर पृष्ठ विजेट, मेनू, साइट सेटिंग्स, विषयवस्तु सेटिंग्स, र प्लगइन सेटिंग्स बाट खींचिएको सुविधाहरु हुन सक्छ। कहिलेकाँही पृष्ठमा एक वस्तु सम्पादन गर्न, म find० मिनेट सेटिंग्स फेला पार्न प्रयास गर्दछु! यो समस्यामा परेको छ कि विकासकर्ताले उनीहरूका सेटि putहरू राख्नुहोस् जहाँ सजिलै पत्ता लगाउन र अद्यावधिक गर्न सजिलो हुन्छ भनेर वर्डप्रेसले एक उत्तम अभ्यास बनाएको छैन।
त्यसोभए, कुन अन्य सामग्री व्यवस्थापन प्रणालीहरू हामीले लागू गरेका छौं? जबकि हामी यसको लागि WordPress मा झुकाव हेर्न जारी राख्छौं खोजी ईन्जिन अनुकूलित हुने क्षमता, हामी अन्य सामग्री व्यवस्थापन प्रणालीको साथ केहि अविश्वसनीय परिणामहरू देखिरहेका छौं:
सिटेकोर - हामीले केहि ईन्टरप्राइज क्लाइन्टहरूलाई सहयोग गरेका छौं जसले उनीहरूको कम्पनीहरूमा माइक्रोसफ्ट टेक्नोलोजीको प्रयोग गर्छन् र सिटेकोर लागू गरेका छन्। यो एक शानदार सीएमएस उद्यम अंतरिक्ष मा विशाल समर्थन संग छ। हामी यसको सिफारिस गर्न हिचकिचाउँदैनौं।
स्क्वायरस्पेस - गैर-टेक्निकल गर्नुहोस्-आफैंको लागि, म निश्चित छुईन कि त्यहाँ स्क्वायरस्पेस भन्दा राम्रो त्यहाँ सीएमएस छ। मसँग एक ग्राहक छन जुन दुई सातामा कुनै अनुभव बिना आफ्नो साइट निर्माण गर्न सक्षम भयो र परिणाम राम्रो थियो। हामीले साइट ट्वीक गर्न र ट्युन गर्न मद्दत गर्‍यौं, तर एक वर्डप्रेस कार्यान्वयन समान समयमा समान रूपमा लागू गरिएको हुँदैन। अघिल्लो साइट WordPress हो र प्रशासन नेभिगेट गर्न र अपडेट गर्न प्रशासनको लागि एकदमै गाह्रो थियो। उनीहरू पहिले निराश थिए, र अहिले खुसी छन्! र स्क्वायरस्पेसले ईकमर्स सुविधाहरू पनि प्रदान गर्दछ।
क्राफ्ट CMS - हामी ग्राहकलाई सहयोग गर्दैछौं, क्यानभास, क्राफ्ट CMS मा उनीहरूको साइटलाई अनुकूलन गर्दै र म पहिले नै यसको सादगी र प्रयोगमा सजिलोको साथ प्रेममा छु। त्यहाँ क्राफ्ट सीएमएसको लागि राम्रोसँग समर्थित प्लगइनहरूको एक विस्तृत नेटवर्क पनि छ - खोजी र रूपान्तरण अप्टिमाइजेसनको लागि साइटमा विस्तारहरू थप्न हामीलाई सजिलो बनाउँदै।
Weebly - अर्को DIY प्लेटफर्म जुन ई-कॉमर्सलगायतका समृद्ध सुविधाहरूमा हामीलाई अगाडि बढाउने र छक्क पर्न जारी छ। हामीले यहाँसम्म ग्राहकको व्यवस्थापन गरेका छैनौं, तर Weebly को एकीकरणको एर्रे (अनुप्रयोगहरू) धेरै नै विस्तृत छ र सबैको एउटा आवश्यक छ जस्तो देखिन्छ।
त्यहाँ अरूहरु जस्तै छन् Wix वा केही स्वामित्व CMS प्रणालीहरू। Wix सँग गुगलले उनीहरूको साइटहरूलाई अनुक्रमणिका गर्नमा केहि समस्याहरू थिए तर उनीहरूको साइटलाई अधिक खोज इन्धन मैत्री बनाउन कडा मेहनत गरेको छ र तिनीहरूका साइटहरू अनुक्रमणिका साथै कुनै पनि बाहिरका छन्। मैले भर्खरैका वर्षहरूमा Wix सँग कुनै अनुभव गरेको छैन त्यसैले म यसलाई यहाँ जाँच्दिन।
तपाइँको अर्को वर्ष कुन सीएमएस सुविधाहरू आवश्यक छ?
खोज इञ्जिन र सोशल मिडिया क्षमताहरूको बाहेक, हामी वास्तवमै हाम्रा ग्राहकहरूलाई सामग्री व्यवस्थापन प्रणालीमा तिनीहरूलाई के चाहिन्छ भनेर हेर्नको लागि हेर्दछौं। तिनीहरूको अन्य प्रणालीहरूको द्रुत अडिट गर्दा - विशेष गरी उनीहरूको सीआरएमले - हामीलाई कार्यान्वयनमा सजिलो र तेस्रो-पक्ष एकीकरणको लागि समर्थनको कारण उनीहरूलाई एक दिशा वा अर्को दिशामा धकेल्न सक्दछ। वेब साइटहरू आजकल डिजिटल ब्रोशर भन्दा बढि छन् - त्यसैले कसरी CMS लाई फिट भइरहेको छ भनेर बुझ्न बजार र बिक्री यात्रा तपाइँको प्लेटफर्म चयन मा महत्वपूर्ण छ।
के तपाईं आफ्नो सीएमएस संग टाँसिएको छ?
हामी निर्भरतामा पनि हेर्दछौं। यदि एक सीएमएससँग पारदर्शी संयन्त्रका साथ निर्यात वा आयातको क्षमता छैन भने, यो चिन्ताको कारण हुन सक्छ। तपाईंको कम्पनीले CMS मा काम गरेको धेरै बर्षको लागि कल्पना गर्नुहोस्, खोज इञ्जिनसँग अख्तियार निर्माण गर्दै, र रूपान्तरणहरूको धेरै संख्यामा ड्राईभ गर्दै कि तपाईं नयाँ सीआरएम लागू गर्दै हुनुहुन्छ जुन कुनै एकीकरणको माध्यमबाट समर्थित छैन। तपाईंको टोलीले निर्णय लिन्छ कि यो माइग्रेट गर्न चाहन्छ तर CMS ले त्यस्तो गर्न कुनै उपकरण प्रदान गर्दैन।
हामीले यो धेरै पटक देख्यौं - जहाँ कम्पनी बाँधिन्छ र तिनीहरूको विक्रेतामा लक हुन्छ। यो निराश छ र यो अनावश्यक छ। एक महान सीएमएस प्रदायक जसले आफैंमा विश्वास गर्दछ यो सँधै यसको ग्राहकहरुलाई लक गर्न को सट्टा को लागी माइग्रेट गर्न को लागी एक साधन प्रदान गर्दछ।
खुलासा: हामीले यस पोष्ट भित्र सम्बद्ध लिंक को उपयोग गर्‍यौं।
टैग: CMSसेमी निर्भरतासेमी विकाससेमि सुविधाहरूसेमी एकीकरणसेमि बिक्रीसेमी सुरक्षासामग्री व्यवस्थापन प्रणालीशिल्प सेमिसिटेकोरवर्गपाठहप्ताwix
गुगलले सार्वजनिक डोमेन छविहरू स्टक फोटोग्राफी जस्तो देखिन्छ, र त्यो समस्या हो
Vecteezy सम्पादक: नि: शुल्क SVG सम्पादक अनलाइन
जुलाई,, २०१ at 4::2017। बिहान
चाखलाग्दो लेख। यद्यपि मलाई लाग्दछ कि वर्डप्रेस एकदम बुद्धिमान छ, यसमा व्यावसायिक अनुप्रयोगहरू विकास गर्ने क्षमताको कमी छ। त्यस्ता आवश्यकताहरूको लागि तपाईलाई साइटफिनिटी, सिटेकोर, उम्ब्राको वा अन्य समान सीएमएस आवश्यक पर्दछ।